Banaanbixii Indha Qabsashada iyo Isku Calool Adkaysiinta – Rasaasa News
Banaanbixii Indha Qabsashada iyo Isku Calool Adkaysiinta
Jun 18, 2010 Banaanbixii Indha Qabsashada iyo Isku Calool Adkaysiinta
Oo adeerow aan ku waydiiyee wa ayo dadka ka qayb galaya? waxaa ka qayb galay doqon iyo Ilmo daadis reerkeedii dumisay. Oo yaa dirsaday dadkaas aad sheegayso? Dad the hague laga doonayaa isku difaaca is leh oo iska horaysiinaya..
Waxaan filayaa in maalinta bari ah ay tahay maalintii uu Jwxo-shiil, diri lahaa shanqadhii ugu dambaysay jahawareerkii uu ku jiray sanooyinkii ugu dambaysay. Magaalada the hague [the the hague] ee dalka Holand [the Netherlan] ayaa waxa loo sheegay Jwxo-shiil in kooxdiisu ay kala qayb gasho banaan baxa ay soo abaabushay xukuumada xeebta dhiiga Ogadeenka, oo iyadu is leh wax ku yeel dalka aad dariska tihiin.
Dadka la abaabulay ee banaanbaxa ku sameeya la yidhi the hague, waxay ka kooban yihiin Oromo iyo kooxda Jwxo-shiil, oo ay horsocdaan saraakiil Eritrean oo qaatay calamada ONLF iyo OLF oo labadooduba ishood qaatay.
Xiligii la shaaciyey banaanbaxan, ka dib waxaa Eritrea ku yimid siyaasad ka badalan kuwii ay ku socotay, waxay heshiis nabadeed la gashay Jabuuti, mid kalena waxay kula jirtaa Itobiya, waxaa kale oo loo balan qaaday lacagyow kaalmo ah oo la siindoono hadii ay siyaasadeeda wax ka badasho, wayna yeeshay.
Sidaas daraadeed dad badani kama iman doono dhanka Eritreanka, waxaa kale oo iyana baaqan dadka wax akhriya ee la socda isbadalka siyaasada geeska Afrika.
Dhinaca kooxda Jwxo-shiil, waxaan banaan baxaas tagi doonin kuwo badan oo islahaa hogaamiya dadka tagay banaanbaxa, oo kolkii horeba micno daro ahaa. Waxaasi sii kala riday kolkii ay nabad ku wada fadhiisteen ururka ONLF iyo Itobiya banaankana la dhigay Janankii Somaliyeed ee Jwxo-shiil. Waxaa waliba dhabar jab ku noqotay kolkii ay ciidamadii awal ka amar qaadan jiray Jwxo-shiil ay si toos ah u raaceen gudoomiyaha ONLF Eng. Salax Cabdiraxmaan.
Sidaas i daraadeed ayeyna bari dad sidaasi ahi u tagidoonin the hague, waxaase la hubaa in madax gaabnin aan yarayn ay tagi doonaan guriga the hague hortiisa kolka ay oomaana ay soo noqon iyaga oo uu afku engagan yahay. Waxaase wax walba ka daran micno darida ka dambaysa in halkaas la tago.
Wadahadalka Nabada ee Dhexmaray Dawlada Itobiya iyo Jwxo oo Dirba Laga Dareemay Dhulka Somalida Ogadeeniya
Wadahadalada u Dhaxeeya Dawlada Itobiya iyo Jabhadaha Wuxuu ka Mudan Yahay Dhinacyada Ixtiraam